Manifold wuxuu hagaajinayaa xiriirka Microsoft - Geofumadas
Manifold wuxuu hagaajinayaa xiriirka Microsoft
Nofeembar, 2007 Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Markii hore, waxaan ku hirgelinay teknooloojiyada kala cayncayn ah Nidaamku wuxuu arkay horumar yar oo ku saabsan horumarinta shaqooyinka iyadoo la adeegsanayo SQL sever 2007 madal, taasoo keentay baahi weyn oo loo qabo in barnaamij loo sameeyo waxa aan lagu qaban karin SQL ka baxsan rukhsadaha sanduuqa.
Muhiimadda mawduucan waa sababta oo ah isticmaalka sirta "Express Express", oo lacag la'aan ah, hoos u dhigo kharashyada fulinta iyo in aan loo baahnayn isticmaalka Mysql ama meelaha adag ee taageerada. Tani waxay suurtogal ka dhigaysaa in ay fuliso qaar sigaar cabbay iyada oo aanad ku xirnayn Shatiga ama ruqsadaha ugu dambeeya, taas oo la fulin karo iyada oo loo marayo horumarinta oo kaliya u baahan shatiyada runtime.
Well, sida laga soo xigtay qoraal ka soo Manifold, waxay dib u cusbooneysiiyey wadahadalka la leh Microsoft, sidaas darteed isdhexgalka cusub ee server-ka server 2008 waxa uu balanqaaday inuu horumarin doono kartida horumarinta khadadka Microsoft.
Isbedeladaan waxaa ka mid ah:
Saarista iyo qaabaynta xogta ee SQL Server 2008
Isku-dhafan oo ay sameeyaan dad badan oo isticmaala
Editing data by aagga xiisaha leh index index
Xiriirka tooska ah ee SQL Server 2008 iyada oo aan loo isticmaalin software dhexdhexaad ah
GUI Integrated si Erth Virtual
Functionality 64, Windows Vista, Multi-core, processor-badan
Dib-u-dhajinta, sameynta iyo soo dajinta xogta duullimaadka leh SQL database 2008
Indha-indheynta iyo dib-u-dhiska tooska ah ee qaababka sawirada iyo qaababka dhulka
Taageero buuxda oo leh ballaarinta geocoding, falanqaynta shabakada, falanqaynta faytowlka, tixraacyada tooska ah iyo habka qaabaynta muuqaalka.
Hawlaha gaaban ee horay looqaaday ee hawlaha GIS
Interomated arabic ee adeegyada IMS ee labada WFS (Adeegga Adeegyada Bogga), WFS-T, WMS ... nidaamyo. Eye, OGC waafaqsan iyo il furan xitaa milkiilayaasha.
Manifold wuxuu ku adkeysanayaa in tani aysan ahayn horumarinta Beta, laakiin waxaa laga hirgeliyay shatiyada cusub ee la sii daayay ee 8.
Waqtigan xaadirka ah ka guurista shatiga 7x ee 8x waa inaad bixisaa $ 150, inkastoo ay isticmaalayaashu heleen bishii August si ay u cusboonaysiiyaan $ 50.
Via: James Blog bilaash ah
blog GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Miyaad raadineysaa qaybo ka mid ah AutoCAD?
Post Next Atlas ee khariidadaha waxbarashada ... lacag la'aanNext »